VaMugabe Vanoti Havatsigiri Nyaya Yekuti Matunhu Azvitonge
Kurume 05, 2012
Komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva inoti yapedza kupenengura zvinofanirwa kunge zviri mubumbiro idzva zvainoti yakawirirana.
Pazvinhu zvisina kuwiriranwa nekomiti iyi, zvinonzi zvava kuendeswa kukomiti yevanomirira mapato aya munhaurirano dzehurumende yemubatanidzwa pamwe nekuvatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa.
Vatungamiri ava vanonzi vanga vachifanirwa kusangana kuti vazeyewo zvinhu zvisina kuwiriranwa nekomiti iyi, pamusangano wavanoita neMuvhuro wega wega.
MDC neZanu PF dziri kutadza kuwirirana pazvinhu zvakati kuti, chinova chinhu chava kubvunzwa neveruzhinji kuti seyi veCOPAC vava kuisa pfungwa dzavo mukunyorwa kwebumbiro idzva.
COPAC yakapinda muvanhu ichitora pfungwa dzavo pamusoro pezvinhu zvinofanirwa kunge zviri mubumbiro idzva.
Ukuwo mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vapindawo mumakakatanwa anogona kukonzerwa nezvichabuda mubumbiro idzva remitemo yenyika riri kunyorwa, zvichitevera mashoko avo ekuti havadi kuti nyika idimburwe dimburwe, sezvo izvi zvichizoita kuti vanhu vasabatana.
Vachitaura manheru emusi weSvondo paterevhizheni yenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation, VaMugabe vakati Zimbabwe inyika diki diki kwazvo kuti iitwe izvi.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora veMDC-T, vaudza Studio7 kuti matunhu akawanda munyika akatsigira pfungwa yekuti apiwe masimba ekuzvitungamirira mumakanzuru awo, senzira yekuzvisimudzira nayo.
Vari kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva vatiwo nyaya iyi ichange iri mubumbiro idzva iri, uye vanoti vapedza kuongorora gwaro reDraft Constitution.
Nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyi inonzi imwe yenyaya dzisati dzawiriranwa nezvadzo nemapato ari muhurumende yemubatanidzwa.
Vamwe muZanu PF vanonzi vari kuomesa musoro panyaya yekuti matunhu apiwe masimba, vachiti kuita izvi kupa matunhu kuti azvitonge zvizere, izvo zvinozoita kuti nyika ipatsanuke patsanuke.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaMunyaradzi Paul Mangwana veZanu PF, vanotiwo mutungamiri wenyika pamwe nebato ravo vari kutsigira pfungwa yekupiwa kwemasimba kumatunhu, kwete yekuti matunhu azvitonge.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vari mukuru wesangano reCentre for Research and Development, VaFarai Maguwu, vanotiwo nyaya yekupa masimba kumatunhu ino batsira munyaya dzebudiriro yematunhu, sezvo pari zvino zvinhu zvose zviri kuitwa kubva panzvimbo imwe chete.